I-OEM & ODM Queen Matress kanye neBox Spring Costco Uhlu lwamanani entengo | Rayson
Ngemuva kweminyaka yentuthuko eqinile futhi esheshayo, iRayyson ikhule yaba yinye yamabhizinisi anobungcweti kakhulu futhi anethonya eChina. I-Queen Mattress kanye ne-Box Spring Costco namuhla, iRaysonon ibeka phezulu njengomhlinzeki ochwepheshe futhi onolwazi embonini. Singahle siklame, sithuthukise, sikhiqize, futhi sithengise uchungechunge lwemikhiqizo eyehlukene ngokwethu sihlanganisa imizamo nokuhlakanipha kwabo bonke abasebenzi bethu. Futhi, sinesibopho sokunikela ngezinsizakalo ezahlukahlukene zamakhasimende kufaka phakathi ukwesekwa kwezobuchwepheshe kanye nezinsizakalo ezisheshayo ze-Q & A. Ungathola okuningi mayelana ne-Mat Matress yethu entsha yendlovukazi nebhokisi le-BOX SPRICTO nenkampani yethu ngokuxhumana nathi ngqo.Umkhiqizo uyamelana ne-Fray. Imelana nokuhlanza owomile nokugeza okujwayelekile ngaphandle kwenkinga yokuqhekeka kwe-fiber noma ukukhulula ekugcineni okubangela ukuphathwa.